Nnwom 38 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔbɔnefo a wanu ne ho mpaebɔ
“Mayɛ basaa, na mabotow” (6)
Yehowa tie wɔn a wɔtwɛn no (15)
“Me bɔne yɛɛ me so dadwen” (18)
Dawid dwom a wɔde kaakae nsɛm.* 38 O Yehowa, mfa abufuw nka m’anim,Na mfa abufuhyew nteɛ me so.+ 2 W’agyan awurawura me mu tɔnn,Na wo nsa ayɛ duru wɔ me so.+ 3 W’abufuw nti, me ho baabiara nnwo me.* Me bɔne nti, me nnompe mu nnwo me.+ 4 Efisɛ me mfomso aboro me so,+Na ɛdɛn me sɛ adesoa duruduru. 5 Me nkwaseasɛm nti,M’akuru bɔn, na aporɔw. 6 Mayɛ basaa, na mabotow;Mede awerɛhow nantenantew da mu nyinaa. 7 Me ho hyehye me,*Na me ho baabiara nnwo me.+ 8 Madwudwo, na mabubu koraa;Me koma abotow, enti misi apini denneennen.* 9 O Yehowa, nea ehia me nyinaa wunim,Na m’ahomegu nso, w’ani tua. 10 Me koma bɔ denneennen na m’ahoɔden asa.M’aniwa nhu hann bio.+ 11 Me yare nti, me nnamfo ne me mfɛfo mpɛ sɛ wɔbɛbɛn me,Na m’amannifo atwe wɔn ho afi me ho. 12 Wɔn a wɔrehwehwɛ me akum me* no sum me afiri,Na wɔn a wɔpɛ sɛ wodi me bɔne no ka sɛnea wɔbɛsɛe me ho asɛm.+Wɔka nnaadaasɛm da mu nyinaa. 13 Nanso mayɛ sɛ obi a n’aso asiw, enti mintie;+Mayɛ sɛ mum, enti mimmue m’ano.+ 14 Mayɛ sɛ onipa a ɔnte asɛm;Minni anoyi biara. 15 O Yehowa, wo na metwɛn wo,+Na wutiee me, O Yehowa, me Nyankopɔn.+ 16 Mekae sɛ: “Mma wonnni me ho ahurusiAnaa wɔmmmoma wɔn ho so nntia me bere a me nan awatiriw no.” 17 Anka mereyɛ ahwe ase,Ná mewɔ yaw mu daa.+ 18 Mekaa me mfomso;+Me bɔne yɛɛ me so dadwen.+ 19 Nanso m’atamfo ani so yɛ hyew* na wɔn ho yɛ den;*Wɔn a wɔtan me kwa no adɔɔso. 20 Wɔde bɔne tuaa papa a meyɛe so ka;Adepa a meyɛe nti, wɔko tiaa me. 21 O Yehowa, nnyaw me. O me Nyankopɔn, mma wo ne me ntam nnware.+ 22 Yɛ ntɛm bɛboa me,O Yehowa, m’agyenkwa.+
^ Anaa “wɔde yɛ nkae.”
^ Nt., “me honam baabiara nni hɔ a ɛte apɔw.”
^ Nt., “ M’asen mu nyinaa hyehye me.”
^ Anaa “mebobom.”
^ Nt., “m’atamfo te ase.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Nanso wɔn a wɔtan me kwa no yɛ bebree.”